Search မြန်မာ ချောင်းရိာ` 8`. - GenFK.com
မြန်မာ ချောင်းရိာ` 8`.
ABC Kid TV ရဲ့ သီချင်းအသစ်လေးတွေ 32 Minutes 😉 ငွေကျပ် ၇၀၀၀၀ ဝန်းကျင်လောက်ကစ ရင်းနှီးပြီး ✔Instock ထားရောင်းနိုင်တဲ့ Product ✔မိမိဆိုင်မှာ နေရာလည်းသိပ်မယူတဲ့ Portable ဖြစ်တဲ့ Product ✔အမြတ်ကလည်း တခြားကုန်ပစ္စည်းထက် ပိုတဲ့ Product ✔ကလေးတွေကြားထဲမှာလည်း ရေပန်စားတဲ့ Product ❓ရှာနေပါသလား❓ B.Media Kids Songs DVDs & Books Online Store မှ က​လေးသီချင်း ✿ ပုံပြင်​ ✿ သင်​​ထောက်​ကူ ✿ ကာတွန်း ▶VCD ▶DVD များ လက်လီ/လက်​ကား​ရောင်းပေးပါတယ်ရှင်.😊 မူကြိုအရွယ်​က​လေးများ 🌸 နှင့်​ 1st Grade, 2nd Grade က​လေးများ🌻 အတွက်​ သီချင်း​​လေး​တွေသီဆိုရင်း စာသင်​ကြားရာမှာ အ​ထောက်​အကူဖြစ်​မယ့်​ Nursery DVD, Learning DVD နာမည်​​ကျော်​ အီစွတ်​ပုံပြင်​များ, နတ်​သမီးပုံပြင်​များကို English-Subtitle များနှင့်​ထုတ်​လုပ်​ထား​သော VCD & DVD ​ပျော်​​ရွှင်စရာဟာသ​လေး​တွေနဲ့ Funny Cartoon DVD များ, နာမည်ကြီး TV Channel များမှ cartoon series များ စတဲ့ အမျိုး​ပေါင်း ❛ ၁၀၀ ❜ ​ကျော်​ရှိ​သော ▶VCD ▶DVD များကို တဆင့်​ပြန်​လည်​​ရောင်းချလိုသူများအတွက် လက်​ကား​ဈေးနှုန်းသီးသန့်​သတ်​မှတ်​ထားပါတယ်​ရှင်​. သိရှိလိုပါက Message Box မှတဆင့်​ပြန်​လည်​​​ဖြေကြား ​ပေးပါ့မယ်​ရှင်​.📨 တဆင့်​ပြန်​လည်​​ရောင်းချလို​သော Online Shop များ, က​လေးပစ္စည်းဆိုင်​များ Page ထဲဝင်​​ရောက်​​လေ့လာဖို့ဖိတ်​​ခေါ်ပါတယ်​ရှင့်​.☺ က​လေးသီချင်း ✿ ပုံပြင်​ ✿ သင်​​ထောက်​ကူ ✿ ကာတွန်း ▶VCD ▶DVD များ အ​သေးစိတ်​ကြည့်​ရှုရန်​ ​အောက်​ပါ Link ၁ခုချင်းစီနှိပ်နိုင်ပါတယ်▼ All DVD List Link 📀🖱 #NURSERY_SONGS_DVD_Album 🎼 Genre ▪ Nursery Age ▪2-6yrs Price ▪ 1500/ 2000/ 3000 Ks Order to Message Box ➠ http://m.me/b.media7 🗨View Details 👉https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=798146373717303&id=409862069212404 #Best_Cartoon_DVD_Album 🐧 Genre ▪ Cartoon Age ▪2-7yrs Price ▪ 1500/ 2000 Ks Order to Message Box ➠ http://m.me/b.media7 🗨View Details 👉https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=798158753716065&id=409862069212404 #Kids_Stories_DVD_Album 📖 Genre ▪ Story Age ▪2-7yrs Price ▪ 2000 Ks Order to Message Box ➠ http://m.me/b.media7 🗨View Details 👉https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=798414443690496&id=409862069212404 #Special_Learning_DVD_Album 📚 Genre ▪ Educational Age ▪2-7yrs Price ▪ 2000/ 3000/ 3500 Ks Order to Message Box ➠ http://m.me/b.media7 🗨View Details 👉https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=798423970356210&id=409862069212404 #HD_Cartoon_Series_DVD_Album 🐧 Genre ▪ Cartoon Series Age ▪2-9yrs Price ▪ 4500/ 9000/ 10000 Ks Order to Message Box ➠ http://m.me/b.media7 🗨View Details 👉https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=798427900355817&id=409862069212404 #Educational_DVD_Series 👨‍🎓👩‍🎓 Genre ▪ Educational Age ▪2-7yrs Price ▪ 6000 - 22000 Ks Order to Message Box ➠ http://m.me/b.media7 🗨View Details 👉https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=800401200158487&id=409862069212404 #Dance_Music_DVD_Album Genre ▪ Dance Age ▪2yrs and above Price ▪ 2000 Ks Order to Message Box ➠ http://m.me/b.media7 🗨View Details 👉https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=801256800072927&id=409862069212404 Thanksalot for Shopping with Us.🍀
31 Jul 2018 · 743K views
မြန်မာ Unicode အတွက် သူယောင်မယ်များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းအပိုင်း (၄)
အောကျတိုဘာ ၁ ရကျနတှေ့ငျ တဈနိုငျငံလုံးပွောငျးလဲအသုံးပွုတော့မညျ့ မွနျမာ Unicode အကွောငျးဆှေးနှေးဖလှယျခွငျးနှငျ့ အနုပညာရှငျမြား လကျရှိသုံးစှဲနသေညျ့ နညျးပညာဆော့ဝဲလျမြားနှငျ့ လူမှုကှနျယကျမြားအကွောငျး တစတေ့စောငျး " မွနျမာ unicode အတှကျ သူယောငျမယျမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ခွငျး " စကားဝိုငျး အပိုငျး (၄)... ဒီအပတျမှာတော့ မွနျမာယူနီကုဒျ သံတမနျမြားဖွဈ Social Influencer ကိုအရညျကွို နဲ့ သရုပျဆောငျ ထားထကျထကျ တို့ကို ဖိတျချေါထားပါတယျ.. #LaLaKyi #mmunicode
25 Sep 2019 · 17K views
S8:E132 Best Pets of the Week | August 2018 Week 3
17 Aug 2018 · 15M views
Samsung ဖုန်း Android version7and 8 ထဲသို့ မြန်မာ font ထည့်နည်း
Samsung Galaxy S7 ကို အသုံးပြုပြီး Android Version7and 8 အတွက်မြန်မာ font ကို ယခုလိုထည့်ရကြောင်း အထူးဧည့်သည်တော် Samsung ဖုန်းသုံးသူမှ မျှဝေထားပါတယ်။ မြန်မာ font လိုသူများအတွက်အဆင်ပြေပါစေ။ comment ရေးလာပေးတဲ့ Ko Tun ပြောပြချက်အရ အကိုရေ အဲဖက်နဲ့ဒီဖက်များလွဲသလားလို့ ကျွန်တော်ကA8 2018 ကိုင်ပါတယ် ဖုန်ထဲမှာ language. ထဲမှာ zawgyi( myanmar) english ( zawgyi) ဆိုပြီးတခါထဲအပြီးပါလာပါတယ် အဲ့ထဲကမှာ englush ( zawgyi) ကိုပြောင်းလိုက်ရင်တခါထဲသုံးလိုရပါတယ် တဲ့ လေ့လာသူမြန်မာများ အဆင်ပြေပါစေ။
Burmese I.T Community: Phone & Computer Repair Tutorials Group
6 Dec 2018 · 21K views